Monday August 21, 2017 - 10:22:23 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo xalay ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe oo dhanka waqooyi uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Degmada Mahadaay waxay xalay marti gelisay mid kamida dagaalladii ugu cuslaa ee abid ka dhaca degmadaasi kadib markii ciidamada Xarakada Al Shabaab ay weerar dhowr jiho ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada AMISOM iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka Soomaaliya ku leeyihiin degmadaasi.
Dagaalka oo bilaawday xalay fiidkii ayaa soo gaaray saqdii dhexe, ciidamada Al Shabaab ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku heynta magaalada kadib markii ay ka taak roonaadeen ciidamo katirsanaa DF-ka oo gudaha magaalada saldhigyo ku lahaa.
Goob jooge ku sugan degmada Mahadaay ayaa SomaliMeMo khadka taleefanka ugu sheegay in xoogaga Al Shabaab ay qabsadeen saldhigga booliska degmada Mahadaay xarunta degmada iyo dhismayaal kale oo ay ku sugnaayeen mas’uuliyiin iyo saraakiil ciidan.
Ciidamada Al Shabaab ee weerarka qaaday ayaa dab qabadsiiyay saldhig cusub oo dhawaan laga hirgeliyay meel ku dhow buundada weyn ee degmada Mahadaay, xoogaga Al Shabaab ayaa la arkayay iyagoo baaritaanno ka sameynaya xaafado ay deganaayeen saraakiil katirsan DF-ka.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dagaalkii xalay lagu dilay sarkaal magaciisa lagusoo gaabiyay Saydoow sidoo kale waxaa dhaawacmay Daahir Xeysoow oo ahaa taliyaha saldhigga Booliska Mahadaay.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalku uu saameeyay saldhigga ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin dhismayaashii hore ee warshaddii rasaasta Mahadaay, jugta madaafiicda iyo daryanka rasaastii lays dhaafsanayay ayaa xalay laga maqlay deegaano dhowr ah oo hoos yimaad degmada Mahadaay.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay dib uga gurteen degmada saaka waaberigii, waxaana maanta barqadii Mahadaay dib ugusoo laabtay mas’uuliyiinta maamulka oo xalay markii dagaalku uu socday maciin biday saldhigga AMISOM.
Dagaalkii Xalay ayaa imaanaya waqti ciidamada shisheeye ay saldhigyo cusub ka sameysteen degaanka Cali Fooldheere oo dhanka Waqooyi uga beegan Mahadaay waxaana muuqata in is fidinta ciidamada shisheeye aysan waxba ka bedelin habsami usocodka howlgallada Al Shabaab ee Gobolka Sh/dhexe islamarkana ay xabaddu ka socoto degmooyin ay dhabarka dambe marsadeen ciidamada AMISOM.